Roobab laxaad leh oo khasaare u geystay mid ka mid ah Dugsiyada magaalada Hargeysa | Somaliland.Org
Roobab laxaad leh oo khasaare u geystay mid ka mid ah Dugsiyada magaalada Hargeysa
March 31, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Roobab xooggan oo shalay ilaa dorraad ka da’ay magaalada Hargeysa, ayaa khasaare gaadhsiiyay meelo uu ka mid yahay Dugsiga hoose/dhexe ee Sh. Cali Cismaan (Ex-Reece), halkaas oo ay shalay booqdeen Masuuliyiin uu ka mid yahay Wasiirka Waxbarashadu.
Roobab laxaad leh oo dorraad ka da’ay magaalada Hargeysa, ayaa keenay in uu dumo qayb ka mid ah wajahadda hore ee Deyrka Dugsiga Sh. Cali Cismaan (Ex-Reece) ee magaalada Hargeysa iyo khasaare kale. “Sidaad arkaysaanba waxa Roobabkii shalay (dorraad) da’ay ay keeneen khasaare isugu jira in uu dumo Deyrka Dugsigu, sidoo kalena uu keeno Dil-dillaac ku yimi Fasallada Dugsiga qaarkood.” Waxa sidaa tidhi Maamulaha Dugsigaas Marwo Caasha Xasan Cali oo shalay Xarunta Dugsiga ugu waramaysay qaar ka mid ah Warbaahinta dalka. Waxaanay Maamuluhu intaa raacisay oo ay tidhi, “Sidoo kale, Biyuhu waxay galeen Fasallada qaarkood oo ay buuxiyeen.”
Marwo Caasha waxay sheegtay oo kale in Roobabka da’ay ee khasaaraha gaadhsiiyay Dugsigaasi uu wax ka bedelay habkii waxbarashada Dugsiga, isla markaana ardayda qaarkood loo bedelay waqti aanay hore wax u dhigan jirin.
Mar ay Caasha ka hadlaysay in ay arrinta khasaaraha la socodsiiyeen masuuliyinta Wasaaradda Waxbarashada iyo in ay wax jawaab ah ka heleen, ayaa waxay sheegtay inay ku wargeliyeen, isla markaana ay Dugsigaas kormeer ku tageen Wefti ka socda Wasaaradda Waxbarashada oo uu horkacayo Wasiirka Wasaaraddaas Xasan X. Maxamuud Warsame (Gadhweyne). “Waanu ku wargelinay Maamulka Wasaaradda, waxaana saaka (shalay) noo yimi Wasiirka iyo masuuliyiin kale oo ka socda Xafiiska Gobolka, waanay indho-indheeyeen, waxaanay noo sheegeen in ay jawaab ka soo bixin doonaan arrintan oo ay Hay’adaha horgeyn doonaan.” Ayay tidhi Marwo Caasha.
Previous PostWasiirka Waxbarashada oo lagu eedeeyay in uu iska dhego-tiray Dacwad ay u gudbisay Jaamacadda SUTECHNext PostTaageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee Kasoo jeeda gobolka saaxil oo Shir balaadhan Ku Qabsaday dalka uk	Blog